ब्यवस्थापनविज्ञ डा. गौतम योजना आयोगको उपाध्यक्षमा | Ekhabar Nepal
बुटवल, असार ९ ।
प्रदेश नम्बर ५ सरकारले प्रादेशिक योजना आयोगको उपाध्यक्षमा प्राध्यापक डा. ईश्वर गौतमलाई नियुक्त गरेको छ । मन्त्री परिषद्को सोमबार बसेको बैठकले लुम्बिनी बाणिज्य क्याम्पसका पूर्व प्रमुख डा. गौतमलाई नियुक्ती गरेको हो ।
मन्त्री परिषदको निर्णयबारे जानकारी दिदै सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक योजना विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले जेठ १४ गते राजीनामा दिनुभएका डा. प्रकाश श्रेष्ठको राजीनामा स्वीकृत गर्दै उपाध्यमा डा. ईश्वर गौतमलाई नियुक्ती गरिएको जानकारी दिनु भयो ।
ब्यवस्थापनको क्षेत्रमा ख्यातिप्राप्त गौतम लुम्बिनी बाणिज्य क्याम्पसलाई अहिलेको अवस्थामा ल्याउने मुख्य सूत्राधारका रुपमा लिइन्छ । कुनै पनि सस्थाको दीगोपन, अर्थ तथा श्रोत ब्यवस्थापनका लागि गौतमको विशेषज्ञता रहेको छ ।